KABOOLE - iftineducation.com
Kabooluhu wuxuu dadka u sameeyaa kabaha. Kabooluhu waa shaqaale. Isagu wuxuu u dulqaataa dhibaatada iyo hawsha. Markii kabooluhu sameynayo kabo, wuxuu soo qaataa harag la magdiyey. Haragaas wuxuu ku kala jarjaraa qalab loo sameeyay farsamada kabaha.
Taaladan waxey ku taalla magaalada
caan kutahay farsamada kabaha
Farsamada kabooluhu waa hawl dadka intifaac u leh. Kaboolaha dhulkeenu sameyn karaa kabo kasta, maxaa yeelay, isagu farsamada kabuhu wuxuu ku bilaabay yaraan. Kabaha caruurta, kuwa raga iyo kuwa haweenka waxaa dhamaantood sameeya kaboolaha. Magaalada muqdishow, waxaa ku taalla warshad sameysa kabaha jaad kasta. Warshadaasi waxay sameysaa kabo af fiiqan, kuwo af dhuudhuuban, kuwo balbalaaran iyo kuwo sandal ah. Kabooluhu farsamadiisu kuma koobna sameynta kabaha keliya ee wuxuu sameeyaa hadana abxado, sanduuqyo hargo ah, siddeyaal, suuman, kiishado qurqurxan iyo dhar laga sameeyo harag.
Dhaqaalaha horukiciisa kabooluhu wuxuu ka qaataa qayb libaax. Kabooluhu farsamada iyo jaangooyada kabaha aad buu aqoon weyn ugu leeyahay. Kabo markii ay kaa duqoobaan oo aadan iibsan Karin kabo cusub, waxaad u geyneysaa kabihii duqoobay kaboolaha. Isagu lacag yar ayuu kaa qaadayaa, dabadeedna wuxuu kabihii duqoobay kaaga dhigayaa kabo cusub oo kale. Innagu waanu jecelnahay kaboolaha, maxaa yeelay, haddaan kaboole jireen kaba la’aan baannu ku socon lahayn.
Qofkii neceb kabooluhu maxaad ku sheegi laheyd?